Wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaato noocyada faylka ee qaabeynta qaabdhismeedka ah | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadeynta garaafka ah ayaan ku imaan karnaa qaabab badan oo muuqaal ah, midkastoo leh astaamo iyo shaqooyin kaladuwan iyo a noocyo kala duwan oo fara badan laga soo saaray dalabyo kala duwan. Kadibna waa sifooyin taxane ah oo ku lifaaqan sawirrada, kuwaas oo noo oggolow in aan qabanno shaqooyin kala duwan sida kiisku yahay.
Maqaalkani wuxuu soo bandhigi doonaa noocyada qaab muuqaal ee la heli karo gudaha aagga naqshadeynta, u soo bandhigid joogto ah, soo bandhigaya astaamahooda iyo dhinacyada ugu caansan.
Noocyada faylka ee qaabeynta qaabdhismeedka
Markii la isticmaalayo Barnaamijyada naqshadeyntaHadday fudud tahay ama dhib badan tahay, barnaamijka ayaa noo oggolaanaya badbaadi mashaariicdeena sawir qaabab kala duwan, oo na siinaya xulashooyin taxane ah, oo lagu sharxi doono inta ku jirta qoraalka maqaalkan iyo qaababkan aan ka helno:
Khariidad yar: Waa sawirro inta badan loo adeegsado sawirrada, bogagga internetka, moodooyinka caadiga ah sida softiweerka ... iwm. Ma sawiro waxtar badan ku leh qaab dhismeedka shabakadda guud ahaan, iyo sidoo kale aagga sawir qaadista oo ay ugu mahadcelinayaan tayada moodooyinkeeda. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qodob muhiim ah oo ku dhex jira sawirrada 'bitmap images', waxay ku saabsan tahay xallintooda ama cabbirkooda, waana taas in sawirradan ay u muuqdaan kuwo lumin doona tayo badan markii la beddelayo xallintooda, si sax ah marka waxa la raadinayo la weyneeyo cabirka sawirka laftiisa.
Sawirada vector Iyagu waa moodello aan wax ka beddeli karno markay doonaan, iyagoo noo oggolaanaya isla waqtigaas inaan ku faahfaahinno naqshadaha waaweyn barnaamij gaar ah. Guud, sawirada vector Waxaa loo isticmaalaa aagga sawirka farsamada, naqshadeynta garaafka, sameynta astaanta iyo shaqo madax bannaan. Sidaas sawirada vectors-ka waxaa lagu sameyn karaa cabirro aad u gaar ah.
Hadda, qaababka loo heli karo sawir ahaan, waxaan haynaa waxyaabaha soo socda:
JPEG. Waa feyl yar, oo la isku cadaadin karo ilaa xad, taas oo ka dhigaysa mid aad ugu badan qaababka muuqaalka. Waa qaab ahaan qaabka ugu isticmaalka badan ee loogu talagalay sawirrada meeraha kala duwan. Tayada waxaa lagu qeexi karaa iyadoo loo eegayo baahida isticmaalaha iyadoo kuxiran. Sidaas darteed, waa a qaab si ballaadhan loogu isticmaalo daabacaadda moodeelka nolol maalmeedka laftiisa. Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay in tixgelin la siiyo dadka isticmaala iyo daryeelka sawiradooda ay tahay in laga digtoonaado inta jeer ee wax ka beddelka aan u adeegsanno qaabkan, maadaama tayadeedu ay tartiib tartiib u yaraaneyso. Kuwan oo dhan, qaabkani waa mid ka mid ah kuwa loogu isticmaalka badan yahay bogagga shabakadda dhexdeeda, iyada oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanshaheeda lagu sharraxay sida iftiinka u noqon karo.
TIFF. Si ka duwan jpeg, qaabka Tiff waa la tafatiri karaa inta jeer ee adeegsaduhu u arko inay lagama maarmaan tahay, taas oo aan wax u dhimi doonin tayada sawirka sidan oo kale, maaddaama qaabkani uusan oggolaanaynin riixitaan. Marka, sida jpg, qaabkan waxaa loo isticmaalaa sawirrada, joornaalada, naqshadaha sawirka webka, boodhadhka ... iwm. Markaa waa qaab noo oggolaanaya inaan wax ka beddelno nauseam ad, oo leh shardiga keliya ee lagu hurayo suurtagalnimada in la isku cadaadiyo feylkaan.
Bmp. Kani waa feyl kale oo bitmap ah, kaas oo ah qaabka asalka u ah barnaamijka ranjiga Microsoft. Natiijo aad ugu eg tiff sida suurtagalnimada wax ka beddellada aan dhammaadka lahayn, laakiin hoos u dhigista miisaanka sawirka laftiisa, taas oo adkaynaysa isticmaalkeeda bogagga internetka. In kasta oo ay tayo sare leedahay, faylka ayaa culeys ku noqon kara adeegsiga ganacsiga ee shabakadda.
GIF. Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah qaababka xilligan, ay ugu wacan tahay suurtagalnimada Abuur animation waqtiga dhabta ah, qaabkani waa mid si gaar ah looga yaqaan bogagga internetka. Waxay taageertaa 256 midab oo ku dhex jira khariidadeeda pixel oo dhan, taas oo waxay dhalisaa luminta tayada gudahood sawirro ay kujiraan midabbo badan.
Sidaa darteed, isticmaalkeedu waa mid soo noqnoqda, iyada oo ay ugu wacan tahay suurtagalnimada in la qiimeeyo animations-ka ay soo saarto iyada oo aan loo baahnayn in lagu rakibo barnaamij gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaato noocyada faylka ee qaabeynta qaabdhismeedka ah
Waad salaaman tahay, waan akhriyay maqaalka, waxaanan u malaynayaa in qaab kale la waayi karo, tusaale ahaan EPS (oo ka dhalan kara barnaamijka tifaftirka vector-ka (Ilustrator, Corel Draw, FreHand (horeyba loo isticmaalay)) ama barnaamijka khariidada waxoogaa (sawir-qaade), qaab kale oo dulinka ah wuxuu noqon karaa SVG, DWG, PDF.
Qaabka Tiff wuxuu taageeraa riixitaanka LZW (waa faham sax ah feylka), oo aan luminayn wax tayo ah.
Jawaab si Daniel Santiago
Noocyada faylalka 'PNG, RAW AND DNG' ayaa maqan
Mawduucani ma dhammaystirna, inta badan sawir qaade waxaan u isticmaalaa qaabka Raw maxaa yeelay wuxuu kuu oggolaanayaa inaad adeegsato hawlo kala duwan shaybaarka muuqaalka, iyo kuwo kale, qaab kasta wuxuu gaar u yahay hawl cayiman oo la qabanayo